Iran: Horaka “Ho lavenona i Rosia” nandritra ny vavaka zoma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2009 16:54 GMT
Nandritra ny vavaka zoma ny 17 jolay lasa teo izay natao tao amin'ny anjerimanontolon'i Téhéran dia nangataka ny hamotsorana ireo mpanao fihetsiketsehana marobe nosamborina tany Iran taorian'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 jona lasa teo ny filoha teo aloha Ali Akbar Hashemi. Fifidianana nahalany an'i Mahmoud Ahmadinejad.
Manohana tsy misy fepetra an'ilay mpanohitra Mir Hossein Moussavi i Rafsanjani. Sambany hatramin'ny fifidianana no nitarihany vavaka isan-joma.
Mpanohitra maro any an-toerana no nandray anjara tamin'io vavaka zoma io, ary ny sasany miakanjo maitso, loko lasa hamantarana ny hetsika Moussavi.
“Ho lavenona i Rosia”
Hatramin'izay rehefa mivavaka zoma dia ny antsoantso hoe “Ho lavenona i Amerika” sy ny hoe “Ho lavenona i Isiraely” no nahoraka. Ankehitriny indray dia novana hoe “Ho lavenona i Rosia”, satria ampangain'ireto mpanohitra ireto ho nandray anjara tamin'ny fanazaran-tena nataon'ny miaramila mpanao famoretana iraniana i Rosia.
Amin'ity lahatsary manaraka ity, nalaina tsy lavitra ny toeram-pivoriana, dia henonao ny feon'ny lehilahy iray miantsoantso mafy hoe “Ho lavenona i Amerika”, “Matesa ny mpihatsaravelatsihy”, “Ho lavenona i Angletera”, ho valin'izany kosa dia mihorakoraka ny rehetra hoe “Ho lavenona i Rosia!”.
Saminejad miresaka ny zava-nitranga, no nilaza fa nisy resa-pady vaovao nofohazina androany.
Iraneema kosa no nilaza tao amin'ny twitter fa nodoran'ireto olona ireto ny sainam-pirenena rosiana.
Nanaparitaka ireto mpanao fihetsiketsehana miakanjo maitso ireto ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny fanipazana entona mandatsa-dranomaso. Taorian'ny fivavahana dia nihorakoraka indray ry zareo hoe “Allaho Akbar” (lehibe andriamanitra) sy ny hoe “miongana ny mpanao didy jadona””.
Indro sarimihetsika fito noraketina nandritra ny fihetsiketsehana androany:
Fandresena mamy marikivy
Iraneema no nilaza tao amin'ny twitter fa mpanao fihetsiketsehana 12 no nosamborin tao Téhéran androany.
Hadi Nili nilaza tao amin'ny twitter” (namaly an'i @onlymehdi) “Nanafika mpivavaka ny polisy! Nataoko fa anisan'ny governemanta tsy hanao izany velively i Iran!”.
Mpiasan'ny BBC News, Jim Sciutto no nilaza tao amin'ny twitter fa tsy nalefa tamin'ny fahitalavim-panjakana iraniana ny kabarin'i Rafsanjani.
Jomhour no milaza fa nihoatra ny nantenaina ny kabarin'i Rafsanjani satria dia nanakiana tanteraka ny famoretana natao tamin'ireo mpanohitra miakanjo maitso izy ary nilaza koa izy fa “fandresena vaovao indray androany no azon'ny hetsika maitso iraniana”.
Mollah Hassani no nanoratra fa niseho ho tsaratsara kokoa noho ny niandrasana azy i Rafsanjani. “Tsy nanaja an'i Ali Khamenei, mpitarika lehibe izy, ary tsy nilaza zavatra ratsy mihitsy mikasika ny hetsika maitso”